China PC Solid sheet / Hollow Sheet Extrusion Line - CHEER Ukwakha kanye nefektri | Jiahao
Operation ukusebenza ntathu
Imishini yomugqa wokukhiqiza iqukethe izingxenye ezintathu
Host function host: imishini esiteshini ngasinye ukuqedela isenzo senzo.
Efana: ohlangothini isikhunta ukubeka umshini, ekupheleni isikhunta homing umshini, enesisindo othomathikhi futhi yokudla umshini nezinye izinhlobo 12 imishini;
I-host operation host: imishini enikeza amandla wokusebenza nokusebenza kwesenzo kulayini wonke.
Njengokuthi: umshini wokushintsha, umshini wokucindezela, umshini we-homing, ipulatifomu yokuphakamisa nezinye izinhlobo eziyishumi zemishini;
➂ udini aphethe: izingxenye prefabricated imishini udini. Kubandakanya amasethi wokufa wokuma okujwayelekile.
Inqubo yokugeleza kolayini wokukhiqiza
Indawo yokusebenzela: 120 × 15㎡
Isigaba sokufa sisesiteshi esisebenza esiteshini somhlaba ukuqedela inqubo esethiwe yokwenziwa kwemisebenzi ehlukahlukene; Bese ufaka umzila wesondlo ongaphansi komhlaba wesondlo ongalawuleka; Ngemuva kokuphothulwa kwesondlo ngokwecebo, iphakanyiselwa phansi iphinde isetshenziswe kabusha ngemuva kokukhishwa kwezingxenye ezifanelekile.
Layout isakhiwo olunzulu
Yonke imishini entanjeni yokukhiqiza yamukela ukwakheka okukhulu kwe-modular, ngakho-ke inezinzuzo zokubeka izinga eliphezulu, ukufakwa okulula nokugcinwa, ukuhambisana okubanzi kokuthuthuka, kanye namamojula womsebenzi kulayini wokuqala wokukhiqiza we-PC nawo angakhethwa futhi asetshenziswe.
Ukusebenza okulula nokusebenza kahle okuphezulu;
Assembly othomathikhi inhlangano, ukuqaqa kanye nokuthuthwa kohlangothi kufa futhi ukuphela die ziyafezeka;
Maintenance ukugcinwa komhlaba
Ukulondolozwa okuphezulu kokushisa, ukonga ugesi kanye nokuvikelwa kwemvelo kuyaqinisekiswa;
Cost izindleko eziphelele zokutshala imali zikalayini omusha wokukhiqiza zincishiswe kakhulu
Njengokuthi: izindleko zomhlaba; Izindleko zokwakhiwa kwemali enkulu; Izindleko zemishini; Izindleko zabasebenzi; ➄ izindleko zokusebenza; Izindleko zemvelo; Izindleko zokuphatha.
Olandelayo: I-PVC SHEET SHEET EXTRUSION LINE
I-Pc Hollow Sheet Extrusion Line
Umshini We-Plastic Hollow Sheet Extrusion
Kk Lukathayela Hollow Ishidi extrusion Line
Kk Grid elingenalutho Ishidi Ishidi
Kk Umugqa Weshidi Elingenalutho we-extrusion
Kk Mesh Ishidi Elingenalutho Umshini
Kk Pc elingenalutho Ishidi extrusion Line
Kk Pe Pc elingenalutho Ishidi extrusion Line Machine